Ilhan Cumar oo shaacisay in ay la aqal gashay Tim Mynett. – Banaadir Times
By banaadir 12th March 2020 77
Warbaahinta Fox News ee dalka Mareykanka ayaa ku soo warrantay in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo katirsan aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka, lagana soo doorta Minesota ay shaacisay inay aqal gashay.
Ilhan ayaa barteeda Instagram-ka soo dhigtay sawir iyada iyo seygeed cusub ee Tim Mynett. Tim ayaa horay u ahaa lataliyaha Ilhan Cumar ee arrimaha siyaasadda.
Ilhan Cumar iyo Saygeeda Cusub waa sawirka ay soo galisay barteeda Instagram-ka.
“Waan guursaday, waxaan lamaane ku ahayn siyaasadda, haddana waxaana ku nahay noolasha, waa barako, Alxamdulilaah”, ayay Ilhan ku qortay sawir ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Instagram-ka.
Xiriirka haasaawe ee Ilhan Cumar iyo Mynett ayaa soo shaac baxay sanadkii la soo dhaafay kadib markii xaaska ay wadajoogeen Mynet, oo lagu magacaabo Beth Mynett oo 55 sano jir ah ay dalbatay furriin.
Ilhan Cumar iyo seygeedi hore, Axmed Xirsi. Saddex carruur ah ayay isu dhaleen
Warbaahinta Fox News ayaa ku soo warrantay in xaaska Mynett ay dalbatay furiin ka dib markii ay tuhuntay in saygeeda uu xiriir jaceyl la la leehay Ilhaan Cumar.
Ilhaan Saygeedii hore iyo Caruurtii ay isku dhaleen oo ah laba Gabdhood iyo wiil.
Waxay Ilhan sheegtay in ay raadinayso sharci ilaalinaya carruurta waxayna maxkamadda weydiisatay in ay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo si wada jir ah loogu hayo saddexda canug ee ay isu dhaleen.
Source:Fox News,BBC & Mustaqbal Radio.
Baaqa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Bristol Uk
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo gaaray Dhuusamareeb